बालबालिकालाई मोबाइलबाट कसरी टाढा राख्ने? अभिभावकले यी कुरा ख्याल गरौं बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट टाढा राख्न साथीहरूसँग खेल्न प्रेरित गर्नेे, पार्कतिर घुम्न लैजाने, मोबाइल चलाउन निश्चित समय निर्धारण गर्ने, मोबाइलका बेफाइदाका बारेमा भन्ने, कुराकानी गर्ने, सधै नजिक रहने प्रयास गर्नुपर्छ। आइतबार, वैशाख २५, २०७९
यी हुन् बच्चाका लागि जरुरी पौष्टिक तत्व आजकाल ठुला मानिसमा देखिने रोग पनि साना बालबालिकामा देखिन थालेको छ। बच्चा बेलैमा मधुुमेहजस्ता रोगबाट बच्चा पीडित हुन थालेका छन्। यसको प्रमुख कारण हो, बालबालिकाको खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन। बिहीबार, वैशाख २२, २०७९
बालबालिकालाई कसरी चलाखीपूर्ण एवं स्वस्थ तरीकाले अनुशासनमा राख्ने? झर्को लगाउने शिशु होस् वा रिसाईरहने किशोर अवस्थाको बालबालिकाको स्याहार सुसार गर्दा, तपाईंलाई आफ्नो रिसमाथि नियन्त्रण राख्न हम्मे-हम्मे पर्छ। आइतबार, चैत २७, २०७८
बालबालिकाको खाना खाने सकारात्मक बानीको विकास गर्न अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने १० कुरा पारिवारिक संरचनामा आएका परिवर्तन, बालबालिकाको शारीरिक संञ्चालनमा कमी, अभिभावकको कार्य व्यस्तता, मोबाइल फोनको प्रयोग, प्राकृतिक स्वादमा आयातित तथा बनावटी स्वादको प्रभाव आदि कारणले गर्दा हाल बालबालिकाको खाना खाने बानीमा चुनौति देखापरेको पाईन्छ। सोमबार, चैत ७, २०७८
बालबालिकाको मुखमा हात हाल्ने बानीले स्वास्थ्यमा पार्ने असर मुखभित्र सामान अड्किदा वा निल्दा श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, वान्ता आउने र बेहोस हुने गर्छन्। बालबालिका खेलौनाका स–साना अंश, टाँक, धागो, गुच्छा, सिक्का निल्दा उनीरुको ज्यान नै जाने खतरा हुन्छ। शनिबार, फागुन ७, २०७८
बालबालिकालाई अनुशासन सिकाउने क्रममा नगरौँ यी ५ गल्ती अनुशासित जीवन जीउनका लागि बालबालिकाहरुलाई सानै उमेरदेखि उत्प्रेरित गरिनुपर्दछ। यसमा अभिभावकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अनुशासन कसैको बलमा भन्दा पनि मनबाट हुने कुरा हुन्। बिहीबार, माघ २७, २०७८
यी हुन् किशोरावस्थाको ब्रेकअप भुलाउने ४ उपाय किशोरकाल अनुभवको काँचो उमेर भएकाले सामान्य समस्याको परिणाम पनि जटिल हुनसक्छ। अभिभावक सचेत हुने हो भने किशोर उमेरका सन्तानलाई ब्रेकअपपछि पनि सहज अवस्थामा फर्काउन सक्छन्। आइतबार, भदौ २७, २०७८
बालबालिकालाई सिकाउनै पर्ने ९ बानी अभिभावकहरुले विकास गरेका विभिन्न प्रकारका संस्कार र बानी स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी छन्। जस्तै : बिहान सबेरै उठ्ने, प्रार्थना गर्ने, बत्ती बाल्ने, भुइँमा सुकुल ओछ्याएर खाने र बारम्बार हात धुने इत्यादि। आइतबार, भदौ २०, २०७८
बालबालिकाका फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्नु यसकारण घातक कलिलो मस्तिष्कले सही र गलत छुट्याउन सक्दैन, त्यसैले उनीहरुलाई तनाव उत्पन्न हुन्छ। ‘फियर एन्जाइटी’को समस्या हुन्छ। यही कारण भविष्यमा ‘डिप्रेसन’मा जाने संभावना हुन्छ। शनिबार, साउन २, २०७८
बच्चालाई ज्वरो आउँदा के गर्ने, के नगर्ने? शिशुलाई ज्वरो आउँदा अभिभावक पनि शारीरिक र मानसिक रुपमा पीडित हुन्छन्। तर, ज्वरो संक्रमणविरुद्ध जुध्ने शरीरको आफ्नै तरिका हो। कतिपय अवस्थामा ज्वरो एक भाइरल संक्रमण हो, जुन बिस्तारै निको हुन्छ। शनिबार, असार २६, २०७८
तपाईंका बालबालिका मोबाइलमा के हेर्दैछन्? यी हुन् डिजिटल प्यारेन्टिङका पाँच टिप्स यहाँ डिजिटल प्यारेन्टिङका पाँच वटा टिप्स प्रस्तुत गरिएको छ। ती टिप्स इन्टिच्युट अफ वेलबिइङका कार्यकारी अधिकृत डा. माइक केल्लीले उनको युट्युव च्यानल इन्टिच्युट अफ वेलबिइङमा दिएको भाषण सुनेर तयार पारिएको हो। बुधबार, असार २३, २०७८
नवजात शिशुको मृत्यु हुने कारण के हो? स्याहार कसरी गर्ने? अत्यावश्यक स्याहारको अभावमा हजारौं नवजात शिशुहरु संक्रमणको शिकार भई मृत्युको मुखमा पुग्ने गर्दछन्। शुक्रबार, चैत ६, २०७७
बच्चाले खान मानेन, के गर्ने? सुरुमा बालबालिकालाई खाना खुवाउँदा निकै होस गर्नुपर्छ। एउटा खाना खुवाएपछि तुरुन्तै अर्काे परिवर्तन गर्नुहुँदैन। त्यो खानामा बानी बसेपछि र उसको स्वास्थ्यले पचाउन थालेपछि मात्रै अर्को प्रकारको खाना खुवाउनुपर्छ। आइतबार, फागुन ९, २०७७
साथीबिनाका बालबालिका : कलिला मस्तिष्कमा क्वारेन्टाइनको असर बालबालिकाहरू आफ्नो इच्छाअनुरूप आफ्ना साथीसँग रमाउन पाइरहेका छैनन्। खेल्न पाइरहेका छैनन्। हर क्षण आमा बुबाको साथमा घरमै बसिरहँदा बाल मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्ला? यो महामारीले अहिले हुर्किरहेका पुस्तालाई दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्ला? आइतबार, पुस ५, २०७७
किन यति धेरै जापानी बालबालिकाहरू विद्यालय जान मानिरहेका छैनन्? जापानमा हजारौँ बालबालिकाहरू विद्यालय जान मानिरहेका छैनन्। यस्तो गर्नुलाई जापानी भाषामा 'फुटुको' भनिन्छ। विद्यालय जान नचाहने बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यस्तो समस्या विद्यार्थीको भन्दा पनि विद्यालय प्रणालीको प्रतिविम्ब हो कि भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ। बुधबार, कात्तिक २६, २०७७
नवजात शिशुमा देखिने खतराका १२ लक्षण र स्याहार गर्ने १२ तरिका नवशिशुलाई संक्रमण हुनबाट जोगाउन धेरै भीडभाड भएको स्थानमा नलग्ने, शिशुलाई छुँदा, स्तनपान गराउँदा साबुनपानीले मिचीमिची हात धुनुपर्छ। सोमबार, साउन १२, २०७७
कोरोना महामारी : बच्चाको स्वास्थ्यबारे अभिभावकले जान्नैपर्ने कुरा अहिलेसम्म विश्वमा भएका अध्ययनमा बालबालिकामा कोरोना भाइरस जटिल रुपमा प्रस्तुत भएको पाइएको छैन र मृत्युदर पनि कम छ। क मंगलबार, जेठ १३, २०७७
लकडाउनमा बालबालिका : मोटोपन बढ्न नदिन के गर्ने? समय बिताउने नाममा बालबालिकाले घन्टौंसम्म टिभी तथा मोबाइलको स्क्रिनमा ध्यान दिइरहेका छन् र शारीरिक रुपमा निष्किय भएका छन्। यसले गर्दा उनीहरुको शरीरमा बोसो बढ्न गई मोटोपनको सिकार हुने गर्छन्। शुक्रबार, चैत २८, २०७६
कोरोनाभाइरस: के बालबालिकालाई अरूसँग खेल्न दिनुपर्छ के बालबालिकाहरू घरबाहिर गएर साथीहरूसँग खेल्न हुन्छ? कि सामाजिक दूरीको अर्थ उनीहरूको खेल समयको अन्त्य हो? शनिबार, चैत ८, २०७६
सहज तरिकाले बच्चा हुर्काउन मनोवैज्ञानिकका पाँच सुझाव जब हामी बच्चा हुर्काइरहेका हुन्छौँ, हामी आफूलाई आफ्ना बाबुआमाले कसरी हुर्काए भन्ने सोच्छौँ। यसको अर्थ हो हामी जसरी हुर्कियौँ त्यसैगरी आफ्ना सन्तान हुर्काउन चाहन्छौँ। हामीले बाबुआमाबाट थुप्रै असल कुराहरू अनुसरण गरिरहेका हुन सक्छौँ। मंगलबार, पुस २९, २०७६
स्वस्थ दूधले बच्चाहरुमा मोटोपनको जोखिम कम – अध्ययन सेन्ट माइकल अस्पताल अफ युनिटी हेल्थ टोरन्टोको नेतृत्वमा भएको एक अध्ययनपछि ‘अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन’मा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित छ। बिहीबार, पुस १७, २०७६
बच्चामा हुने मोटोपना : रोकथाम र व्यवस्थापन कसरी गर्ने? बिहीबार, मंसिर २६, २०७६
बालबालिकाको शारीरिक निष्क्रियता ठूलो समस्या संसारभरका ८० प्रतिशत ११ देखि १७ वर्षका बालबालिका र युवाहरूले आवश्यक शरीरिक गतिविधि नगर्ने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। बुधबार, मंसिर ११, २०७६